FALANQEYN KOOBAN: Ka dib Doorashadii Gudoomiye Max’ed Mursal, maxaa laga filan karaa baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya? – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES)- Falanqeeyaasha Siyaasadda Soomaaliya ayaa aad uga welwelsan shaqada baarlamaanka Faderaalka, gaar ahaana xubnaha Aqalka Hoose oo ay welwel ka qabaan in ay noqdaan golle u dhisan oo kaliya howlaha ay qabanayso Xukuumada Faderaalka.
Walaaca ugu weyn wuxuu dhashay saacado markii ay soo baxday doorashadii Gudoomiyaha baarlamaanka cusub oo uu ku guuleystay Maxamed Mursal Sh Cabdiraxmaan oo ahaa wasiirkii DIfaaca ee Xukuumada Xasan Cali Kheyre hogaamiyo, iyadoo waqti badan ay galisay Madaxtooyadu.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan in ay caqabado badan hareyn doonaan golahan, gaar ahaana damacyada uga imaanaya dhinaca Xukuumadda oo sii kordhaya, gaar ahaana mar kasta ay Xukuumaddu doonayso in ay hesho baarlamaan ay iyadu maamusho.
Wasiirkii hore ee Difaacu wuxuu la dhacsanaa fikradda ku aadan in Xukuumaddu ay la wareegto arrimaha baarlamaanka, waxaana uu qeyb ka ahaa loolankii meesha looga saaray Maxamed Sh Cismaan Jawaari.
Welwel badan kama taagna in baarlamaanku aysan qaban doonin wixii loo igmaday mudo xileedkooda, marka loo eego sidda ay kala qeybsan yihiin iyo arrimaha cusub ee ay hadda dhexda- ugaleen.